DHAGEYSO:-SHIRKADDA HUBAAL TRADERS COMPANY OO XARUN CUSUB KA FURATAY BAYDHABO | SMC
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO:-SHIRKADDA HUBAAL TRADERS COMPANY OO XARUN CUSUB KA FURATAY BAYDHABO
Xaflad lagu daahfurayey Hubaal Traders Comapany ayaa ka dhacday Baydhabo, waxaana ka soo qeyb galay ganacsato, dhalinyaro iyo Odayaal kuwaasoo danaynayey shirkadda la daahfurayo adeegyada ay bixiso si ay qeeb usaamilayda Shirkadda.
Cabdi Usgoowe Deeroow, waa maamulaha Shirkadda Hubaal Trades ee lagu daahfuraey Baydhabo, waxaa uu ka soo qeybgalayaasha munaasabada daahfurka Shirkadda u sharaxay adeegyada ay qabanayso iyo sida ay bulshada Baydhabo uga qeeb qaadan karaan maalgeshiga Shirkadda.
Maxamed Samoow Musdhaf oo ku hadlayey magaca Odayaasha dhaqanka oo soo dhaweyn iyo mahadnaq dhalinyarada ku fikertay shirkaddan in ay ka hirgaliyaan Baydhabo ku bilaabay hadalkiisa kadib ayaa waxaa ku dardaarmay in aysan noqon shirkadda mid kaligeed danaysata , balse ay ka filayaan in ay noqoto shirkad ka shaqeysa dalka una shaqeeysa.
Siid Cali Qaasim Maxamed oo ah Madaxa Gobolada Dalka Shirkadda Hubaal Traderes o oaf meerkii munaasabadda hadal jeedinta qaatay ayaa dul istaagay muhiimada shirkadan loo unkay , goobaha ay ka shaqo bilaawday ee ay xarumaha ku leedahay iyo ujeedada ku dhalisay in ay farac ka mid ah Shirkadda ka furan Baydhabo, waxaan uu sidoo kale Qaasim uu ka jaawabay su’aalo ay weeydiiyeen ka soo qeeb galayaashii munaasabadda.
Previous articleDaawo: Ninkii Muqdisho ka fuliyey qaraxii maanta ee NISA ay soo qabatay oo ka hadlay siduu u fuliyey
Next articleFarmaajo oo Wakiil Gaar ah u magacaabay ina adeerkiis, dacwada Badda kala xaajoonayo Kenya